Rabiby - Wikipedia
Rabiby dia mpanjaka tao Anjozorobe tamin'ny taonjato faha-16, raiben-d Ralambo tamin-dreniny.
Hatramin'ny taonjato faha-16 taorian' i J.K, dia maro ireo zanak'andriana sy fianakavian'ny mpanjaka amin'ny faritr'i Arabia no niala tany Arabia noho ny ady antrano teo amin'ireo zanak'andriana mpandova fanjakana, ka nidina nanaraka ny sisiny antsinanan'i Afrika ary nizarazara namorona fanjakan'andriana tamin'izany faritra izany. Isan'ireny ireny ny zanak'andriana na printsy Habib sy ireo mpanjaka arabo tao Zanzibar sy Komoro ary ireo razan'andriana namorona fanjakana tao avaratra andrefan'i Madagasikara sy tamin'ny faritra antsinanan'i Madagasikara rehetra. Arak'izany, fianakavian'ny zanak'andriana Habib avokoa ireo mpanjaka avy any Arabia namorona fanjakan'andriana taty Afrika antsinanana. Fotsy fihodirana i Habib, toy ireo mpanjaka tao Komoro sy Zanzibar izay fianakaviany.
Nanana sambo azy manokana sy nitondra azy i Habib sy ny fianakaviany ary ireo mpanotrona azy sy ireo angaralahiny. Ny angaralahy dia olo-mainty mpanompo novidiany tao Afrika Atsinana. Tody tao Vohemar ny printsy Habib sy ny mpanotrona azy, ary noho ny finoany dia resy lahatra izy fa tokony hiditra an-tanety ary tsy hijanona amorontsiraka fa hiakatra any anivontany satria any ny toerana efa foin'Andriamanitra hanjakany, araka ny finoany. Tsy mba nijanona ela tao amorontsiraka araka izany i Habib fa avy hatrany dia niakatra taty afovoantany ka tonga tao Anjozorobe.
Anjozorobe moa tamin'izany dia efa nisy fanjakana vazimba maro izay taranaky ny mpanjaka Andriantomara, ny mpanjaka Andriatomaramanana, ny mpanjaka Andriantomarafefy, taranak'Andriamoraony sy Andrianerinerina, andriana jiosy niditra tany amin' ny faritra atsinanan' i Madagasikara, efa taloha be an' i J.K. Nanoa mora foana an'i Habib ireo mpanjaka vazimba taranak'Andriatomara ireo ka nanaiky an'i Habib ho mpanjaka ary i Habib dia naka vady an-dRamaintsoakanjo izay zanaka vavin'ny mpanjakaben'ny vazimba tao Anjozorobe.
Tao Anjozorobe ihany no nanjaka i Habib ka Ambohitsitakatra no anaran'ny vohitra nisy ny rovany ary ny lapany nataony hoe "Fonohasina". Tsy naharitra ela tao Anjozorobe anefa i Habib fa mbola maro ireo fanjakana vazimba tsy nanoa azy ary be jirika ny faritr'Anjozorobe koa nilaozany io faritra io ary nianatsimo hatrany izy ka tsy nijanona raha tsy tao Ankotrokotroka izay vohitra lehibe indrindra tamin'ny vohitry ny Vazimba taty amin'ny faritra atsimon'Anjozorobe.
Talohan'ny nanafihany io vohitr'Ankotrokotroka io dia nanao fangatahana na joro teo ambany avaratra antsinanan'Ankotrokotroka ny mpanjaka Habib ka raikitra mandrak'Ankehitriny ho Fonohasina no anaran'io toerana io araka ny niantsoan'ny mpanjaka Ralambo izany tato aoriana ho fahatsiarovana io joro nataon'i Habib raibeny io. Koa nafenin'i Habib teo amin'io toerana io ny lefompohy volamena miisa valo voasikotra teny semitika masina sy vato mazava, ka nirariany fa hiely amin'ny lafivalontany ny fanjakany sy hahitsy ela fanjaka.
Rehefa izany dia nanihiny Ankotrokotroka ka nitsoaka nianatsimo nankeroa Analamanga ny Vazimba nonina teo.
Nihanitombo laza i Habib ka nogasian'ny olona ny anarany ary angamba noho ny toetrany masiaka ka nataon'izy ireo hoe "Rabiby". Ary novain-dRabiby hoe "Ambohidrabiby" ny anaran'Ankotrokotroka ary teo no nataony renivohitry ny fanjakany ka nasiany rova sy lapa nonenany sy ny ankohonany.
Rehefa izany dia nitombo laza hatrany Rabiby ka saika raiki-tahotra azy ny fanjakana vazimba sy maley sisa nanodidina azy. Tamin'ireo fanjakana vazimba sy maley nanodidina ny fanjakan-dRabiby teo Ambohidrabiby dia ny fanjakana maley tarihin'Andriamanelo tamin’ny taona 1540-1575 teo Alasora no isan'ny lehibe indrindra satria efa nanoa an'Andriamanelo ireo andriana maro. Andriamanelo moa dia taranaky ny mpanjaka Andriantomara ihany avy amin'ny reniny sy renibeny Rafohy sy Rangita. Lalin-tsaina ny mpanjaka Andriamenelo manoloana ny tanjaka sy lazan'ny mpanjaka Rabiby ka niditra ho zana-dRabiby ary naka vady an-dRabefaravolamanjaka zanaka vavimatoan-dRabiby. Randapavola zanany vavy aivo anefa no nomend-Rabiby ho vadin'Andriamanelo fa Rabefaravolamanjaka kosa nampanambadiany an'Andrianamboninolona izay zanak'Andriamananitany rahalahin'Andriamanelo. Nisy fanambadiana roa sosona arak'izany teo Ambohidrabiby tamin'ny andron-dRabiby.
Ankoatra izany, nanakoako eran-tany eran-danitra ny lazan-dRabiby ka tonga hatrany Itasy ary dia nifamitram-pihavanana koa Rabiby mpanjakan'Ambohidrabiby sy Andriambahoaka afovoanintany mpanjakan'Itasy izay nanana ny renivohitry ny fanjakany tao Manazary Itasy ary dia nisy fianakaviana sy tera-dRabiby nankany Manazaray Itasy ary nisy fianakavian'Andriambahoaka afovoantany sy taranany nakanty Ambohidrabiby tao Antsomangy.
Nanampy laza ny tanja-dRabiby koa ny maha mpanandro tsy nanam-paharoa azy tamin'ny vanimpotoana niainany ka voatazon’ny ohabolana hoe "Aza milaza mahita volana alohan’i Rabiby". Novain-dRabiby ho teny semitika ny anaram-bolana 12 sy ny anaran'andro 7 taty anivon'ny riaka raha tamin'ny teny vazimba sy maley izany.
Ny Alahamady no nataony volana voalohany amin'ny taona sy renimbitana ary nataony amin'ny zoro avaratra antsinanana izany vintana izany.
Marihina fa amin'ny maha-mpahay nandinika ny lanitra ny sy tany azy dia saika nibahana teo amin'ny fijerin-dRabiby ny tontolon'ny fipetraky ny volana sy ny kintana, ka amin'izany angamba no nakan-dRabiby ny anaram-piandrianan'ireo zanany vavy roa (rehefa nanambady izy ireo) satria samy ahitana ny teny hoe "vola" dia Rabefaravolamanjaka sy Randapavola. Rehefa fenomenana ny volana dia lasa boribory toy ny vola ary manjelatra toy ny volamena. Tsy mandehandeha foana anefa izany fijerin-dRabiby izany satria ireo razan'andriamanjaka eran'i Madagasikara dia saika samy nanome lanja ny vola sy volana teo amin'ny tontolony tamin'io vanimpotoana niainan-dRabiby io. Manaporofo izany, Zafimbolamena sy Zafimbolafotsy no hiantsoana ireo fianakavian'andriana sakalava sy antakarana; Zafindravola, Andrevola no anaran'ireo fianakavian'andriana bara maroseranana sy masikoro; ary fenovola no anaran'ny lapan'andriana antemoro ao Vohipeno. Ny fenovola sy fenohasina moa dia iray ihany satria rehefa feno ny volana dia feno ny hasina ka andro fanaovan-javatra sy firavoravoana izany. Izany dia mampiseho indray fa manam-pahalalàna ny mpanjaka Rabiby, ary fianakavian'ireo jiosy nanjaka taty Madagasikara izy.
Nisy fotoana narary mafy Rabiby, ka ny zana-dRabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona no tena nikarakara azy, mihoatra noho ireo zanany naterany. Noraisin-dRabiby ho toy ny zanany mihitsy ny tera-dRabefaravolamanjaka, ka rehefa tratra antitra Rabiby dia ireo tarana-dRabefaravolamanjaka, atao hoe Andriandoriamanjaka, ireo no nokasainy hampanjakainy. Tsy nanaiky anefa ireo zana-dRabefaravolamanjaka ireo koa ny zana-dRandapavola, atao hoe Ralambo, no nampanjakainy.
Ny zafin'ny mpanjaka Rabiby moa no nokasainy hampanjakaina, ka dia nataony hoe "Manjakazafy" ny anaran'ny lapany teo Ambohidrabiby ary dia Ralambo zafikeliny no nanjaka nandimby azy teo. Rehefa niamboho Rabiby dia nafenina teo andrefan'ny lapany Manjakazafy ao antampon'Ambohidrabiby. Hatrizay mandrak'ankehitriny, amin'ireo mponina sy foko maro monina eo Ambohidrabiby sy ny manodidina, dia ny Andriandoriamanjaka sy ny tera-dRasendrasoa tamin'Andrianampoinimerina ary ny Zanadralambo no tarana-dRabiby. Ny Zanadravoromanga kosa izay taranaky ny Mpanjaka Ralambo zafikelin'ny Mpanjaka Rabiby kosa dia nandao tanteraka an'Ambohidrabiby tamin'ny nanjakan'Andrianjaka ka tsy misy ao intsony ankehitrio.
↑ Jereo ny bokin' ny Pastora Ramilison Emmanuel (1951). Ny loharanon'ny andriana nanjaka teto Imerina : Andriantomara-Andriamamilazabe. Imprimerie Ankehitriny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabiby&oldid=969859"
Dernière modification le 7 Aprily 2019, à 04:34
Voaova farany tamin'ny 7 Aprily 2019 amin'ny 04:34 ity pejy ity.